IPad इशाराहरू: प्रो जस्तो आईप्याड नेभिगेट गर्न सिक्नुहोस्
IPad मार्गदर्शकहरू र ट्यूटोरियलहरू
यी इशाराहरूसँग प्रो जस्तो आईप्याड नेभिगेसन जान्नुहोस्
by दानियल राष्ट्र
आईप्याडलाई प्रयोग गर्न सजिलो छ किनकी धेरै नेभिगेट गर्न इशाराहरू धेरै धेरै सहज छन्। आईप्याडमा सुरू गर्न धेरै सजिलो छ, अनुप्रयोग सुरु गर्न को लागी अनुप्रयोग आइकन ट्याप गरेर विभिन्न पेजहरू र मेनूको माध्यमबाट स्क्रोल गर्न स्वाइप गर्दछ। तर तपाईं आईप्याडमा हरेक इशारा जान्नुहुन्छ?
आईप्याड उत्पादकत्वको लागि थप अधिकृत भएकोले, यसले धेरै उपयोगी इशाराहरू उठाएको छ जुन सबैलाई थाहा छैन। यसमा एक छुपा नियन्त्रण प्यानल, भर्चुअल ट्रयाकप्याड र पर्दामा बहु अनुप्रयोगहरू ल्याउने क्षमता समावेश गर्दछ। र जब तपाईं यी इशाराहरु लाई सिरी को अनुस्मारकहरु, बैठकहरु र सैकड अन्य चीजहरु लाई तपाईंको लागि गर्न सक्छन् को क्षमता को साथ गर्न को क्षमता संग जोड दि्छ, आईपैड उत्पादकता को लागि एकदम बयान हुन सक्छ।
माथि / तल स्क्रोल माथि स्वाइप गर्नुहोस्
टिम रोबेर्ट्स / टैक्सी / गेट छविहरू
सबैभन्दा आधारभूत आईप्याड इशाराले तपाईंको औंला पृष्ठहरू वा सूचिहरूमा स्क्रोल गर्न स्विडिङ गर्दैछ। तपाइँ स्क्रिनको तलमा औंलाको टिप राखेर यसलाई स्वाइप गर्न प्रदर्शनको शीर्षमा लैजानुहोस् सूचीमा स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलोमा, यसलाई स्वाइप गरेर तल स्क्रॉल गर्न प्रतिवादी लगाउन सकिन्छ, तर यदि तपाईले सोच्नु भएको छ भने तपाइँको औंला स्क्रिनमा घुमाउँदा, यो अर्थ बुझ्छ। तपाईं तल स्वाइप गरेर एक सूची स्क्रॉल गर्न सक्नुहुन्छ, जुन स्क्रिनको शीर्ष माथि राखेर पूरा गर्दछ र स्क्रिनको तल तिर सार्नु पर्छ।
तपाईंले थप्नु भएको गतिले पनि एक पृष्ठलाई स्क्रोल गर्नेछ कसरी चाँडोमा भूमिका खेल्छ। यदि तपाइँ फेसबुकमा हुनुहुन्छ र छिटो आफ्नो स्क्रिनलाई तलको तलबाट प्रदर्शनको शीर्षमा सार्नु हुन्छ, तपाईंले स्क्रिनबाट लिफ्ट गरेपछि पृष्ठले तपाइँको अँगालो मात्र एकदम कम गतिमा पछ्याउनेछ। यदि तपाइँ छिट्टै स्वाइप गर्नुहुन्छ र तुरुन्तै औंला लिनुहुन्छ, पृष्ठ धेरै छिटो उडान गर्नेछ। यो सूची वा वेब पृष्ठको अन्तमा प्राप्त हुन ठूलो छ।
अघिल्लो सार्नुहोस् सार्नको लागि साइड-टु-साइड स्वाइप गर्नुहोस् अघिल्लो
यदि वस्तुहरू तेर्सो रूपमा प्रदर्शित हुन्छन् भने, तपाईं कहिलेकाहीँ स्क्रिनको एक पक्षबाट अर्को दिशामा नेविगेट गर्न स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक उत्तम उदाहरण तस्बिर एप हो, जुन तपाईंको आईप्याडमा सबै फोटोहरू प्रदर्शन गर्दछ। जब तपाईं फोटो पूर्ण स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले अर्को फोटोमा सार्नको लागि बायाँ तिर बायाँ तिरमा आईप्याड प्रदर्शनको दायाँ तिर स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी, तपाइँ अघिल्लो फोटोमा सार्न दायाँबाट बायाँबाट स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले Netflix जस्ता अनुप्रयोगहरूमा पनि कार्य गर्दछ। "नेटफिक्समा लोकप्रिय" सूचीले चलचित्र र TV शो पोस्टरहरू स्क्रीनमा देखाउँछ। यदि तपाइँ पट्टेहरूमा दाँयाबाट बायाँतिर स्वाइप गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरू एक carousel जस्तै, थप भिडियोहरू खुलासा गर्नेछ। धेरै अन्य अनुप्रयोगहरू र वेबसाइटहरू एकै तरिकाले जानकारी प्रदर्शन गर्दछ, र अधिकले नेभिगेशनका लागि स्वाइप प्रयोग गर्नेछ।
जूम गर्न पिच गर्नुहोस्
यो अर्को आधारभूत इशारा हो जुन तपाइँले यो महान् एक पटक प्रयोग गर्नुहुनेछ। वेब पृष्ठहरूमा, आईप्याडमा धेरै फोटोहरू र धेरै अन्य स्क्रिनहरू, तपाईं बाहिर पिसाई गरेर जुम गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईंको औंला र सूचकांक औंला सँगसँगै छुट्याएर तिनीहरूलाई स्क्रीनको केन्द्रमा राख्न र त्यसपछि तपाईंको औंलाहरू अलग गरेर लैजाने छ। स्क्रिन बाहिर खिच्नका लागि तपाईका औंलाहरू प्रयोग गर्दै जस्तै सोच्नुहोस्। तपाईं दुईवटा औंलाहरू स्क्रिनमा राखेर जगेडा आउट गरेर जूम गर्न सक्नुहुन्छ जब तिनीहरू अलग छन् र उनीहरूलाई एक साथ राखिन्छन्।
संकेत: यो इशारा पनि तीन चुन्च लामो समय सम्म काम गर्दछ जब तपाईं चुरोट बनाउनुहुन्छ र पर्दामा इशाराहरूमा चुचाउनुहुनेछ।
शीर्षमा सार्नको लागि शीर्ष मेनु ट्याप गर्नुहोस्
यदि तपाईंले वेब पेज स्क्रोल गर्नुभएको छ र शीर्षमा फर्कन चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई ब्याक अप स्क्रोल गर्न आवश्यक छैन। बरु, तपाईं धेरै शीर्ष मेनु ट्याप गर्न सक्नुहुनेछ, जुन बाँयामा Wi-Fi सिग्नल र दाँयामा ब्याट्रि गेजको साथ एक हो। यो माथि मेनु ट्याप गर्नाले तपाईंलाई वेब पृष्ठको शीर्षमा पुग्छ। यसले अन्य अनुप्रयोगहरूमा पनि नोटहरूमा नोटको शीर्षमा जान्छ वा तपाईंको संपर्क सूचीको शीर्षमा जान्छ।
शीर्षमा सार्नको लागि, त्यो शीर्ष पट्टीको बीचमा प्रदर्शित समयको लागि उद्देश्य। धेरै अनुप्रयोगहरूमा, यसले तपाईंलाई पृष्ठको शीर्षमा वा सूचीको सुरुवात गर्नेछ।
स्पटलाइट खोजको लागि तल स्वाइप गर्नुहोस्
यो एक राम्रो चाल हो जुन तपाईं आफ्नो iPad संग गर्न सक्नुहुनेछ । जब तपाईं कुनै गृह पृष्ठमा हुनुहुन्छ - जुन पृष्ठ हो जुन तपाईंको अनुप्रयोगहरू प्रदर्शित गर्दछ - तपाइँले स्पटलाइट खोज प्रकट गर्न स्क्रीनमा तल स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सम्झनुहोस्, केवल स्क्रिनमा जहाँ पनि ट्याप गर्नुहोस् र तपाईंको औंला तल घुमाउनुहोस्।
स्पटलाइट खोज तपाईको आईप्याडमा केहि पनि खोज्नको लागि एक राम्रो तरिका हो। तपाईँ अनुप्रयोगहरू, संगीत, सम्पर्कहरू खोज्न वा वेब खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। स्पॉटलाइट खोजको साथ एक अनुप्रयोग कसरी सुरुवात गर्ने »
अधिसूचनाहरूको लागि शीर्ष किनाराबाट स्वाइप गर्नुहोस्
गृह स्क्रिनमा हुँदा प्रदर्शनको लगभग कुनै पनि भागबाट स्वाइप गर्दै स्पलाइटलाइट खोजी ल्याउनेछ, तर यदि तपाइँ प्रदर्शनको धेरै शीर्ष किनाराबाट स्वाइप गर्नुहुन्छ, आईप्याडले तपाईंको अधिसूचनाहरू देखाउनेछ। यो जहाँ तपाइँ कुनै पनि पाठ सन्देशहरू, रिमाइन्डरहरू, तपाईंको क्यालेन्डरमा घटनाहरू वा विशिष्ट अनुप्रयोगहरूबाट अधिसूचनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ लक लक स्क्रिनमा हुँदा यी अधिसूचनाहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईंलाई दिनको लागि योजना बनाएको छ कि हेर्नको लागि तपाईंको पासकोडमा टाइप गर्न आवश्यक छैन। बढि »
कंट्रोल प्यानलका लागि तल्लो किनाराबाट स्वाइप गर्नुहोस्
नियन्त्रण कक्ष शायद आईप्याडको सबैभन्दा उपयोगी 'लुकेको' विशेषता हो। म यसलाई लुकेको रूपमा उल्लेख गर्दछु किनभने धेरै मानिसहरू पनि यो महसुस गर्दैनन्, र अझै पनि, यो अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ। कंट्रोल प्यानलले तपाईंलाई आफ्नो संगीत नियन्त्रण गर्नेछ, भोल्युम समायोजन वा गीत छोड्दै वा ब्लुटुथ वा AirDrop जस्ता सुविधाहरू चालू गर्नेछ। तपाईं पनि नियन्त्रण कक्षबाट आफ्नो स्क्रिनको चमक समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं स्क्रिनको तलल्लो किनाराबाट स्विप गरेर नियन्त्रण कक्षमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो अधिसूचना केन्द्र कसरी सक्रिय गर्ने भन्ने सही विपरीत हो। एकपटक तपाईंले तल किनाराबाट स्विप गर्न सुरु गर्नुहुनेछ, तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि नियन्त्रण प्यानल सुरु हुन सुरु हुनेछ। नियन्त्रण प्यानलको प्रयोग गरेर थप पत्ता लगाउनुहोस् ।
बायाँ किनाराबाट पछाडि सार्नुहोस् स्वाइप गर्नुहोस्
अर्को हातमा स्वाइप-बाट-किनारा इशारा प्रदर्शनको बायाँ किनाराबाट स्वाइप गर्न को लागी प्रदर्शनको बीचमा 'साईकल ब्याक' आदेश सक्रिय गर्न सक्षम हुन्छ।
सफारी वेब ब्राउजरमा, यो तपाईंलाई अन्तिम भ्रमण गरिएको वेब पृष्ठमा लैजानेछ, जुन यदि तपाइँ Google समाचारबाट एक लेखमा जानुभएको छ र समाचार सूचीमा फर्कन चाहानुहुन्छ भने।
मेलमा, यो तपाईंलाई ईमेल सन्देशबाट तपाईंको सन्देशहरूको सूचीमा फिर्ता लिनेछ। यो इशाराले सबै अनुप्रयोगहरूमा काम गर्दैन, तर धेरैसँग सूची छ जुन व्यक्तिगत वस्तुहरूको सर्तमा यो इशारा हुनेछ।
वर्चुअल ट्र्याकप्याडका लागि कीबोर्डमा दुई फिंगरहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यो हरेक वर्ष मीडिया आउटलेटहरू कसरी एप्पल अब अभिनय गर्छन भन्ने बारेमा कुरा गर्छ, र अझै पनि तिनीहरू हरेक वर्ष वास्तवमा सुन्दर संग आउँदैनन्। तपाईंले भर्चुअल ट्र्याकप्याडको बारेमा सुनेको हुन सक्दछ, जुन धेरै खराब छ किनभने यदि तपाईं आईप्याडमा धेरै पाठ प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, वर्चुअल ट्र्याकप्याड पुरा तरिकाले भयानक छ।
तपाईले वर्चुअल ट्र्याकप्याड सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि समयमा अन-स्क्रिन किबोर्ड सक्रिय छ। केवल दुई उंगलहरू एकै समयमा किबोर्डमा राख्नुहोस्, र प्रदर्शनबाट औंला उठाएर बिना स्क्रिनको वरिपरि घुमाउनुहोस्। एउटा कर्सर तपाईंको पाठमा देखा पर्नेछ र तपाईका औंलाहरूसँग सार्नेछ, तपाईलाई कर्सर सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाई यो चाहनुहुन्छ। यो सम्पादन सम्पादनका लागि उत्कृष्ट छ र सम्पादन गर्न प्रयास गर्दै पाठ भित्र आफ्नो औंला थिचेर कर्सर सार्ने पुरानो तरिकालाई बदल्दछ। बढि »
दाँया किनारा बहुकोस्कबाट स्वाइप गर्नुहोस्
यो इशारा केवल आईप्याड एयर वा iPad मिनी2वा नयाँ आईप्याड प्रो ट्याब्लेटहरू सहित नयाँ मोडेलमा काम गर्नेछ। यहाँ चाल यो हो कि इशाराले पहिले नै एक अनुप्रयोग खुला हुँदा इशारा मात्र गर्दछ। टाढा-दायाँ किनाराको बीचमा तपाईंको औंलापट्टी राख्नुहोस् जहाँ स्क्रिन बेवलमा पुग्छ र स्क्रिनको केन्द्रको छेउमा औंला फ्लाइनेछ स्लाइड-ओभर बहुस्किंगमा संलग्न हुन्छ, जसले अनुप्रयोगलाई आईप्याडको छेउमा एक स्तम्भमा चलाउन अनुमति दिन्छ। ।
यदि तपाइँसँग एक आईप्याड एयर 2, आईपिस मिनी4वा नयाँ आईप्याड छ भने, तपाईं स्प्लिट-स्क्रिन बहुकलक संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनुप्रयोगहरू भरिएको पनि यो सुविधा समर्थन गर्न आवश्यक हुनेछ। स्लाइड-मा बहु बहुस्क्याङ्गी संग, तपाईं स्प्लिट-पर्दा समर्थित हुँदा अनुप्रयोगहरूको बीचमा एक सानो पट्टी देख्नुहुनेछ। बस स्क्रिनको बीचमा सानो सानो पट्टी सार्नुहोस् र तपाइँ सँग दुई एपहरू सँग छेउमा हिडिरहेका छन्। बढि »
अनुप्रयोगहरू नेविगेट गर्न चार फिंगर साइड स्वाइप गर्नुहोस्
आईप्याड डिस्प्लेमा चार औंलाहरू राख्न र त्यसपछि बायाँ वा दायाँ सक्रिय एप्स मार्फत नेभिगेट गर्नेछ। बायाँका औंलाहरू बायाँ सार्दै तपाईंलाई अघिल्लो एपमा लैजानेछ र तिनीहरूलाई सार्दा अर्को अनुप्रयोगमा लैजान्छ।
अघिल्लो एपमा सार्दै तपाईंलाई एक एपबाट अर्को अनुप्रयोगमा सार्न प्रयोग गरे पछि मात्र कार्य गर्दछ। यदि तपाईंले खुला गर्नुभएको अनुप्रयोग गृह स्क्रिनबाट सुरू गरिएको थियो र तपाइँले अर्को अनुप्रयोगमा सार्नको लागि multitasking इशारा वा multitasking एप पट्टी प्रयोग गर्नुभएन भने, इशारा प्रयोग गर्न अघिल्लो एप हुनेछैन। तर तपाईं अर्को (अन्तिम खोलिएको वा सक्रिय) अनुप्रयोगमा सार्न सक्नुहुन्छ।
बहु फेसस्क्रिन स्क्रिनको लागि चार फिंगर स्वाइप गर्नुहोस्
यो एक धेरै समय बचत सेभर तपाईं दुई बटन बटन क्लिक गरेर एकै कुरा गर्न सक्नु भएको बेलामा छैन, तर यदि तपाईं औंलाहरू स्क्रिनमा पहिले नै हुनुहुन्छ, यो एक सर्ट सर्टकट हो। तपाईँ बहुविधस्क्रीन स्क्रिनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, जुन हालै खोलिएको एप्सको सूची देखाउँदछ, आईप्याड स्क्रिनमा चार औंलाहरू राखेर तिनीहरूलाई प्रदर्शनको शीर्षमा सार्दै। यसले तपाईंको अनुप्रयोगहरूको सूची प्रकट गर्नेछ।
तपाईं यस स्क्रिन प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई स्क्रिनको शीर्षमा छिटो स्वाइप अप वा स्वाइपबाट एपिपको अनुप्रयोगलाई कारकोसेल नेभिगेट गर्न फ्लिप गरेर अनुप्रयोगहरूलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
गृह स्क्रिनको लागि पिच इन गर्नुहोस्
अर्को शर्टकटले गृह बटन (यो समय एक क्लिकमार्फत) पूरा गर्न सकिन्छ, तर अझै पनि राम्रो हुन्छ जब तपाईं प्रदर्शनमा तपाईका औंलाहरू छन्। यो एक पृष्ठमा जूमिंग जस्ता काम गर्दछ, केवल तपाईं दुई को बिरुद्ध चार औंलाहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। केवल आफ्नो औंलाहरू प्रदर्शनमा तपाईंको औंलाहरूको सुझावहरू फैलिएको बेलामा राख्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँका सबै औंलाहरू सँगै एकैचोटि एकैचोटि समाईरहेका थिए। यो एपबाट बन्द हुनेछ र तपाईंलाई फिर्ता आईप्याडको गृह स्क्रीनमा लैजानुहोस्।
थप आईप्याड पाठहरू
यदि तपाइँ केवल आईप्याडको साथ सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो एक सानो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तपाइँ हाम्रो आधारभूत आईप्याड सब्सक्राइजहरूमार्फत जाँदा टाउको सुरू गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईंलाई शुरुवातबाट विशेषज्ञलाई कुनै समयमा लैजान सकिन्छ।
Autism Spectrum Disorder को लागि उत्तम iPad अनुप्रयोग
प्रत्यक्ष रूपमा आईप्याडमा प्लेसूचीहरू बनाउने
तपाईंको आईप्याडमा भण्डारण कसरी विस्तार गर्ने
आईप्याडमा अनुप्रयोगहरू कसरी डाउनलोड गर्ने?
IPad स्थान सेवाहरू असक्षम वा सक्रिय कसरी गर्ने
तपाईंको गीली आईप्याड कसरी बचत गर्ने?
एक iPad बाट तपाइँको आईप्याडमा सदस्यता रद्द गर्न कसरी
IPad को बारे मा सबै भन्दा खराब चीजहरु
आईप्याडमा कसरी गिटार सिक्न
एप्पलको क्लाउड - क्लाउड एरेनामा नवीनतम सनसनी
Windows Live Hotmail Exchange ActiveSync सेटिङ्हरू
Windows XP उत्पादन कुञ्जी परिवर्तन गर्न चरण गाइड द्वारा चरण
आईफोन मेलमा फ्री Windows Live Hotmail कसरी पहुँच गर्ने
Facebook नोटहरू अझै HTML को समर्थन गर्दैन, तर अझै विकल्प छ
जिमेल र Google+ मा भ्वाईस र भिडीयो कलहरू कसरी बनाउने?
परिभाषा सिक्नुहोस् र PowerPoint स्पिकर नोटहरूमा प्रयोग गर्नुहोस्
सबै एप्पल को बारेमा एप्पल होम को बारे मा जानना चाहिए
Outlook.com सेवा स्थिति जाँच गर्नुहोस्
'नोब' / 'Newb' के हो? नोब / न्यूब मतलब के गर्छ?
हटमेलमा संलग्नको रूपमा ईमेल फर्वार्ड गर्दै
रिंग्स को प्रभु: मध्य पृथ्वी द्वितीय धोखाधड़ी को लागि लड़ाई
अक्टोबर: हाम्रो बीचमा अल्ट्रा संस्करण संस्करण
तपाईंको पोडकास्ट र वेबकैस्टहरूमा रेकर्डिङ फोन कलहरूको लागि समाधान
12 चालक डाउनलोड वेबसाइटहरु समीक्षित
एक्सेल HLOOKUP सँग विशिष्ट डेटा फेला पार्नुहोस्
शब्दमा वाटरमार्क थप्दै
सुरक्षित मोडमा Windows 8 वा 8.1 कसरी सुरू गर्नुहोस्
कसरी जाँच र स्थापना विन्डोज अपडेटहरू
उपयोगी मेटा ट्यागहरू